Waaheen Media Group » Ciidanka RRU-da oo xalay gurigiisa kala baxay Cismaan Awr-liqe iyo Carruutiisa
Browse:Home Waaheen News Ciidanka RRU-da oo xalay gurigiisa kala baxay Cismaan Awr-liqe iyo Carruutiisa
Ciidanka RRU-da oo xalay gurigiisa kala baxay Cismaan Awr-liqe iyo Carruutiisa
Published by Waaheen Media on June 8, 2013 | 0 Comment
Dhawr guri oo kale ayay Hargeysa u daateen saqdii dhexe
Hargeysa(Waaheen) Ciidanka la dagaalanka Argagixisada ee RRU-da ayaa xalay laba guri oo Hargeysa ku yaala kala baxay Dad rayid ah oo hurday, kuwaas oo ay ka mid yihiin Cismaan Awr-liqe iyo Ilma sheikh Abiib.
Guriga Cismaan Awr-liqe oo ku yaala xaafadda Xero Awr ayay abaara 1:00 Habeenimo u daateen koox ka tirsan RRU-da oo wadatay ciidan xoogan, waxaanay jabiyeen Albaabka danbe ee daarada markii Albaabka hore u furmi waayay.
Isla markiiba waxa ay abaareen Cismaan Awr-liqe iyo Laba Wii loo uu dhalay kuwaasoo guriga hurday wakhtigaasi, ilaa hadana lama garanayao sababta loo taxaabay qoyskaasi.
Dhinaca kale, xaafad ku taala Sheekh Madar oo la yidhaahdo Ilma Sheekh Abiib ayaa iyana sidoo kale Ciidanka RRU-du xalay ui dhaceen waxaanay ka kaxaysteen laba Wii loo ilma sheikh Abiib ah oo guriga jiifay.
Wargeyska Waaheen oo booqday guriga Cismaan Awr liqe kadib markii lala baxay ayay Xaaskiisu uga warantay sidii ay wax u dhaceen “ Kabtan xidhana waxa xalay lanagu sameeyay nagumuu samayn. Inta saqdii dhexe albaabka qori dabadii lala dhacay ayaa markii aanu furi weynay xaga danbe la nooga soo daatay, qufulkaas bay jabiyeen, dabadeedna hanjabaad iyo weerar xoog ah ayay nagu qaadeen” ayay tidhi Xaaska Cismaan Awr liqe oo guriga hor fadhiday dumar badan oo jaarka ahina ag fadhiyaan sidii oo Tacsi loo fadhiyo
Iyadoo sii wadata warbixinteeda waxay raacisay “ waxaanu moodaynay markii hore Tuug, Wiil ka mid ah Inamada ayaa yidhi waa Ciidane ka fura, intaanan furinba ayaa kuwii xaga danbe ka soo dhacay Hooyaday oo qolkaa danbe ka soo kacday ayay hor istaageen, ana qori guriga yaalay oo aan hayay baan la soo baxay oo aan cabeeyay, Odaygu qori ma haysto oo Wiil aanu walaalo nahay oo Ciidanka ku jira ayuu kiisii siiyay, kana amaano ayuu nagu ahaa, haddii uu isagu hayn lahaa khasaare ayaa dhici lahaa laakiin anigaa meel dhigay oo ogaa” ayay tidhi
“waadigaa arkaya gurigii way galalafeen Ciidan Rag iyo Dumar leh bay ahaayeen Odaygii, labadii Wiil iyo Qorigiiba way qaateen, wax aanu galnay oo aanu ognahayna ma jirto.” Ayay raacisay iyadoo ka war warsan dhacdada gurigeeda lagu weeraray saqda dhexe.
Cismaan Awr liqe ayaa ahaa Mujaahid ka tirsanaan jiray Ururkii SNM, dhawaana waxa uu iska casilay Xafiiska Madaxtooyadda u qaabilsan Arrimaha Bulshada oo uu Madax ka ahaa, isagoo markii uu xilka ka tagay warbaahinta u sheegay in uu warar uu hayo u soo bandhigi doono, hase yeeshee intii danbe arrintaa afka ka xidhay.
Lama oga qabashadiisu in ay salka ku hayso khilaafka keenay in uu shaqada ka tago oo lala xidhiidhinayay khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo Madaxtooyadda, iyo in arrimo kale ay jiraan.
Ciidanka RRU-da ayaa Habeen hore sidan oo kale magaaladda Burco uga fuliyay hawl gal ay Hub iyo Dadba kaga qab qabteen magaaladda Burco, ilaa hadana wax war ah Xukuumaddu kamay soo saarin dhacdooyinkaasi isdaba jooga ah ee ay Ciidanku fuliyeen